takoorka jinsi ee guryaha iyo shaqada | USAHello | USAHello
In USA, waxaa ka jira sharciyo ku saabsan takoorka jinsi ee guryaha iyo shaqada. dadka Trans aan la eryi karo, shaqo diiday, ama ka fog guryaha jeestay maxaa yeelay, iyagu waa kuwa iskaga gudba. Baro ammaanka transgender iyo xuquuqda goobta shaqada iyo guryaha. Ogow meesha aad ka heli talooyin iyo caawimaad.
xuquuqda transgender gaar ah way kala duwan yihiin in gobol kasta. Laakiin waxaa jira qaar ka mid ah sharciyada ku saabsan takoorka jinsi jira oo dhan isku USA.
takoorka jinsi shaqada
Waxaad aan la dhibaateeyay karaa shaqada aad shaqaalaha ama shaqaalaha kale ee. Tusaale ahaan:
Dadka aan ka dhigi kara kaftanka ama comments celceliska ah oo ku saabsan dadka trans.
Dadka uma isticmaali karo magac qaldan ama magac on Ujeedada.
Dadka kuma waydiin karo su'aalo ku fiicnayn ku saabsan jirkaaga ama jinsiga.
Lama warsanayo Adiga ama rasaas shaqada. Tusaale ahaan:
Your Tababaraha aan su'aasha kartaa jinsiga.
Your Tababaraha aadan dab karo sababtoo ah aad tahay labeeb.
Your Tababaraha ma diidi karaan in aad kor u qaadaan, maxaa yeelay, idinku waxaad tihiin jinsi.
Waxaad aan la ka musqusha jeedsaday karaa. Tusaale ahaan:
Your goobta uu leeyahay in aad isticmaasho musqusha oo aad doorato.
Your goobta shaqada ma codsan kartaa waraaqaha caddaynaya jinsigaaga in aad isticmaasho musqusha.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda trans shaqada. Haddii qof ku takoorayo idinka gees ah, hubiyaan si ay u qoraan una sheeg qof waxa dhacaya. Baro badan oo ku saabsan waxa aad samayn karto haddii ay taasi dhacdo.
takoorka jinsi guryaha
Currently, 20 goboleedyada iyo District of Columbia sharciyada taageerada takoorka stop transgender. Haddii aad kireysato ama hantida iibsan gobolada kuwa:
Dadka kuma waydiin karo ee ku saabsan jinsiga ama nooca galmada.
Dadka aan baad u celin kartaa sababtoo ah waxaad tahay transgender.
Dadka aad kuma khasbi karo fasax maxaa yeelay, idinku waxaad tihiin jinsi. Haddii aad qabto heshiis kiro ama heshiis, waa sharci aad u EERK.
Haddii aad u baahan tahay inaad joogtid guriga ammaanka hoy la'aan:
Dadka laga yaabo weydii jinsiga sababtoo ah rag iyo dumarba waxay noqon karaan qolalka gaar ah. Waxaad xaq u leedahay in ay u sheegaan hadba jinsiga aad loo ogaado sida.
Dadka aan codsan kartaa caddayn caafimaad ee lamaanaha.
dadka Trans ayaa lagu qasbay baxay guryahooda iyo hoy hoy la'aan jeedsaday. Mid ka mid ah shan walba dadka jinsi waa mararka qaar bilaa guri ee noloshooda. Your xarunta bulshada LGBT ee kuugu dhow kaa caawin kara inaad ka heli hoy ah oo aan ku qoran online. Forney Center Ali waxa uu leeyahay meel gaarka ah iyo xaaladaha degdegga ah guryaha dhallinyarada LGBT ee waddamada.
ururada sharciga badan oo ku saabsan xaaladaha dadka qaba takoorka khibrad transgender. Waxaa jira qaar ka mid ah hay'adaha sharci gaar ah si ay u taageeraan bulshada LGBT ee.
Lambda Legal waa LGBT qaranka ururka ugu weyn ee gargaarka sharciga. The helpdesk Lambda Legal dib u eegi kartaa kiiskaaga oo aad ku xidhmaan wakiillada degaanka.
ACLU waa urur sharci ah in ay ka dhigan tahay macaamiisha for free. Waxay leedahay barnaamijyada xuquuqda LGBT iyo matalaa dadka LGBT kuwaas oo lagu kadeeday. Waad awoodaa ka heli a affiliate ACLU degaanka in gobol kasta.
Xarunta Qaranka ee Labeeb Equality ka shaqeeya si ay u ilaaliyaan oo dhan xuquuqda trans. Waxa ay taageertaa badan 80 Ururada u taagan macaamiisha trans. Waad awoodaa fadeegyada sharciga u Unugul Yihiin trans ee gobolka.
Jinsi beddelidda iyo isbadalka